Andro: 18 Novambra 2019
Eskişehir Concrete Road Amin'ny Ohatra Nanana ny Torkia
Eskişehir Concrete Road Amin'ny Ohatra Nanana an'i Torkia; Eskişehir Metropolitan Munisipaly, izay ohatra ho an'ny andrim-panjakana maro indrindra miaraka amin'ny làlan-tsambo misy azy any amin'ny faritra ambanivohitra, 13-14 2019 nalamina tany Ankara teo anelanelan'ny Novambra 1. [More ...]
Fiofanana momba ny fitaterana fiara fitaterana an-tsamboPark
Nanomboka fiofanana momba ny mpamily fiara Kocaeli Metropolitan; Kocaeli Metropolitan Munisipalin'ny Kaominaly momba ny fitaterana sy fitaterana fifamoivoizana any amin'ny faritra fitateram-bahoaka ho mpitantana ny TransportationPark Inc. 581 manao asa fiofanana 'Public Transport Driver' homena. [More ...]
387 Bosnia sy Herzegovina
Mitondra bizina ny mpiasan'ny betirianina Konya
Ny basy mpiasan'ny Konya dia mitondra Bosnia; Ny trasy voalohany natao tany Konya tao 1992 ary ny tarika nalaina avy tany Alemana dia nalefa tany Bosnia sy Herzegovina renivohitra Sarajevo niaraka tamin'ny fanapahan-kevitra noraisina nandritra ny vanim-potoana Tahir Akyürek. Fanabeazana ny olom-pirenena ao Konya [More ...]
Fiaran-dalamby haingam-pandeha tsy mbola misy famantarana
Raha ny voalazan'ny proxy CHP dia tsy nisy lesona noraisina tamin'ny loza. Ny solombavambahoakan'ny CHP Ankara Murat Emir dia nilaza fa ny tsy fisian'ny sonia elektronika nahatonga ny lozam-piaramanidina nahafaty olona 9 tany Ankara tamin'ny taon-dasa, Başkentray [More ...]
Atrikasa fitaterana any Ankara
Atrikasa fitaterana any Ankara; 20, fampiantranoana ao amin'ny kaominina Ankara Metropolitan, dia hotanterahina eny amin'ny atrikasa fitaterana hotanterahina ny alarobia novambra miaraka amin'ny fandraisana anjaran'ny ben'ny tanàna Ben'ny tanàna Mansur Yavaş. [More ...]
200 Number S Plate mba hovidiana amin'ny Tender amin'ny Balıkesir
Ny filoha Yılmaz dia mitazona ny toky nomeny 200 S Plate dia hovidiana amin'ny alàlan'ny Tender; Ny ben'ny tanàna ao Balikesir Yucel Yilmaz, dia mampanantena fa hitana ny fampanantenan'ny fifidianana amin'ireo mpivarotra. Balıkesir Metropolitan kaominina, ao amin'ny faritany manontolo [More ...]
Handray ny serivisy teknolojia momba ny teknolojia momba ny teknolojia ho fanamafisana sy fanamboarana ny serivisy hividianana ny serivisy ho an'ny tranokala manokana (TÜLOMSAŞ)
Famoahana any Kocaeli 'Tsy misy herisetra amin'ny vehivavy'
Ny overpass any Kocaeli dia nilaza fa 'Tsia amin'ny herisetra amin'ny vehivavy'; Ny kaominin'i Kocaeli Metropolitan, 15-30 teo anelanelan'ny Novambra 2019, ny Dr. Sadık Ahmet sy Bülent Ecevit dia manondro ny fiverimberina ho toy ny loko herisetra atao amin'ny vehivavy eto amin'izao tontolo izao [More ...]
Nikarakara atrikasa 'Smart City Workshop' ny IMM
Nikarakara ny atrikasa IMM 'Smart City Workshop' natao; Atrik'asa N Smart City en nokarakarain'ny Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) Tale jeneralin'ny departemantan'ny informatika Smart City Directorate [More ...]
Famaritana avy amin'ny EGO momba ireo Escalators tsy mandeha amin'ny Metro Stations
Ny talen'ny Jeneraly EGO Ankara Metropolitan dia nitatitra fa ny fanamboarana ireo escalator maloto any amin'ny tobin'ny metro dia ho vita amin'ny fotoana fohy. Fanamarihana X 14 momba ireo escalator tsy miasa any amin'ny gara any Oktobra izay 2019; Ankara Subway, [More ...]
EGO Hahazo Mpamadika Vehivavy 10 Ho an'ny Fitateram-bahoaka; Ny talen'ny jeneraly EGO Ankara Metropolitan Eto dia nanokatra fanadinana hampiasa fiara 10 mpamily fiara fitateram-bahoaka amin'ny fiara fitateram-bahoaka. Ho EGO ho an'ny asa [More ...]
Fandraisana lehibe ho an'ny mpianatra ao Ankara
Fandraisana tsara ho an'ny mpianatra ao Ankara; Mansur Yavaş, Ben'ny tanànan'ny Ankara Metropolitan, dia manohy mametraka fampiharana izay manamora ny fiainana ao an-drenivohitra. Natomboka teto Ankara tamin ’ny voalohany araka ny baikon’ ny filoham-pirenena Yavaş ary voafaritra ny taona [More ...]
Toro-tsofina ho fahatsiarovana an'i Atatürk amin'ny Çubuk
Ankara Metropolitan Municipality Çubuk Family Life Center, 81. Tao anatin'ny faritry ny herinandro fitsingerenan'ny andro nahaterahana dia nikarakara ny hetsika Tanışma Meet with Tandem Bicycles ”, izay fantatra amin'ny bisikileta roa ao Çubuk. Voalohany mitaingina bisikileta tandem [More ...]